Islaayidoota Hundaaf iraatoo ykn Jalaantoo ida'u
Hundatootni, islaayidootaaf yaadannoo dhaaf fi hiraaf nibala.
Irraantoo ykn jalaantoo durmurtaa'a wantootaa dabalu
Akaakuun hundaataa hundi iddoo durmura'aa muraasa, bara jalaantti oofi lakkoofsoota slaayidii qabaachuuf qabaata.
Yemmuu gara mul'anno hundataatti jijjiirtu, iddo sana hundatarratti iddoo barbaadeetti sochosu dandeessa. Barruu dabalataa galchuufi iddicha deebistee hamamtaa isaa jijjiiruu dandeessa. Qabeentoota iddoo sanaa filachuufi dhangii barruu fayyadamu dandeessa. Fakkeenyaaf hamamtaa bocaquu ykn halluu jijjiiruu dandeessa.
Mul'annoo – Irraantoo fi Jalaantoo fili.
Qaaqa fuuloota cancala lama waliin argita: Islaayidii fi Yaadannoo fi Hirtaalee iddoo durmurtaa'eef bakka qabeentoota galchuu dandeessutti.
Duraantoon, sanduuqni filannoo Guyyaa fi Sa'aatiin ni hojjatu garu dhangiiya akka siranaatti yemuu qindaa'u, sanduqini naqa barruu immo duwwaa ta'a kanaafis baraafi sa'aatin islaayidoota irratti hin murtaa'an.
Durtiin, sannduqni too'annoo Jalaantoo dandeessifamaa dha, garuu saanduqni naqa barruu duwwaa dha, kanaaf jalaantoon homaatuu islaayidootarratti hin mul'atu.
Duraantoonni sanduuqni filannoo Islaayidii lakkoofsa ni haqama, kanaafis lakkofsi islaayidii tokkoolee hin mula'atu.
Qabeentoota islaayidoota hundarratti mul'achuu qaban galchi ykn fili.
Bal'ina baraa cuqaasiitii dirree sa'aati fi baraa sochosi. Dirree <date/time> fili, islaayidoota hundarratti barraafi sa'aatiif dhangii fayyadamuuf dhangeessuu fayyadame. Bal'ina jalaanto fakkasumaas bal'ina lakkoofsa islaayiditiif haluu makaanaan fayyadamta
Wanntoota barruu akka wantoota irraantoo ykn jalaantoofi dabalu.
Yeroo xumurtuu, Mul'annoo – Baratamoo fili.
Saagi – Dirreewwan filachuun, dirreewwan kanneen akka barruufi lakkoofsa fuulaa gara irraantootti ykn jalaantootti dabaluu dandeessa.
Title is: Islaayidoota Hundaaf iraatoo ykn Jalaantoo ida'u